musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Nei uchibhururuka Finnair kuburikidza neHelsinki kuenda pasirese?
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Finland Kuputsa Nhau • France Kuputsa Nhau • Germany Kuputsa Nhau • Hong Kong Kupwanya Nhau • Japan Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • Singapore Kupwanya Nhau • Spain Kuputsa Nhau • Sweden Kupwanya Nhau • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
Finnair inozivisa nendege itsva dzeEurope, Asia neNorth America
Finnair yakazivisa mamwe mafambiro uye nendege nyowani kuTokyo, Osaka, Seoul, Bangkok, Singapore, Hong Kong, Chicago, New York, Miami, Los Angeles, Stockholm, Amsterdam, Munich, Dusseldorf, Berlin, Frankfurt, London, Paris, St. Petersburg , Krakow, Gdansk, Madrid, Malaga neBarcelona.
Finnair inoenderera ichishandira nzvimbo dzayo dzakakosha dzeAsia, ichibhururuka zuva nezuva kuenda kuTokyo, Seoul neBangkok, uye inopa akawanda masvondo evhiki kuenda kuSingapore neHong Kong.
Finnair inosimbisa masevhisi eNorth America uye ichashandira Chicago, yaimbove nzira yezhizha, mumwaka wese wechando.
Finnair's European network ichawedzera nekukurumidza muma frequency mukati mechando, iine masevhisi maviri ezuva nezuva kumaguta eEurope akadai seAmsterdam, Munich, Dusseldorf, Berlin neFrankfurt.
Sezvo mugove wevakazara vakabaiwa vanhu uri kuramba uchiwedzera uye nzanga dziri kuvhura, kufamba kuri kutora mumisika yakati wandei. Finnair irikusangana nekuwedzera kwekudiwa kwekufamba nekuwedzera maficha nenzvimbo munzvimbo dzayo muEurope, Asia neNorth America yenguva iri kuuya yechando.
Finnair inoenderera ichishandira nzvimbo dzayo dzakakosha dzeAsia, ichibhururuka zuva nezuva kuenda kuTokyo, Seoul neBangkok, uye inopa akawanda masvondo evhiki kuenda kuSingapore neHong Kong. Finnair's Osaka sevhisi inotangazve muna Gumiguru, ichiwedzera huvepo hwaFinnair mumusika weJapan, naNagoya achibatana neiyi nzira portfolio muna Kukadzi. Finnair ichatangawo kushandira yayo Dubai kubatana nendege yemuviri wakakura.
Finnair inosimbisa masevhisi eNorth America uye ichashandira Chicago, yaimbove nzira yezhizha, mumwaka wese wechando. Finnair inoshandawo New York zuva nezuva kubva kuHelsinki uye inoshanda nendege nhatu dzevhiki kuenda kuMiami neLos Angeles zvichiteerana. Pamusoro pekushandira North America kubva kuHelsinki hub, Finnair ichaunza nzira dzakananga kuLos Angeles neNew York kubva kuStockholm, Sweden. Finnair ichazivisawo nzira dzakananga kubva kuStockholm kuenda kuMiami, Phuket neBangkok, sezvakaziviswa kare.
Finnair's European network ichawedzera nekukurumidza muma frequency mukati mechando, iine masevhisi maviri ezuva nezuva kumaguta akakosha eEurope seAmsterdam, Munich, Dusseldorf, Berlin neFrankfurt, uye matatu mafrizheni ezuva nezuva ku London uye Paris. Finnair inowedzerawo mafambiro kuSt.
Finnair zvakare inopa kuwanda maficha zuva nezuva kumaguta eScandinavia, uye Finnair ichaunza Krakow neGdansk yemwaka wechando. Finnair ichawedzera mafambiro kunzvimbo dzinozivikanwa dzezororo kuSpain, kushandira Malaga, Zvitsuwa zveCanary, Madrid neBarcelona zvine frequency yakawanda yevhiki. Zvakare iyo Finnish Lapland inoramba ichikwezva vafambi vechando uye Finnair inopa ina zuva nezuva kubatana kuRovaniemi, Ivalo uye Kittilä, uye maviri ezuva nezuva masevhisi eKuusamo, ane hukama hwakatsetseka kubva kuHelsinki.
"Tinofara kuti tinokwanisa kuwedzera hupamhi nekudzika kwenetiweki yedu, zvichigonesa kubatana kuri nani kwevatengi sezvo kufamba kunoramba kuchikwira", anodaro Ole Orvér, Chief Commerce Officer, Finnair.